Mercedes-Benz နဲ့ Geely တို့ရဲ့ Smart # 1 ကို ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှာ စတင် ရောင်းချ တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် - Pandaily
Mercedes-Benz နဲ့ Geely တို့ရဲ့ Smart # 1 ကို ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှာ စတင် ရောင်းချ တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်
May 30, 2022, 13:49ညနေ 2022/05/30 14:04:21 Pandaily
Mercedes-Benz နှင့် Geely တို့၏ ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီ Smart က ကြေငြာ ခဲ့သည်လျှပ်စစ် အသေးစား SUV Smart # 1 ကို ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှာ စတင် ရောင်းချ တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဧၿပီလ ကုန္တြင္ ကုမၸဏီက ႀကိဳတင္ ေအာ္ ဒါ စတင္ လက္ခံ ခဲ့ၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပး ၿပီးေနာက္ ေစ်း ႏႈန္းမွာ ယြမ္ ၁၉၀, ၀၀၀ မွ ၂၃၀, ၀၀၀ (ေဒၚလာ ၂၈, ၄ ၈၄ မွ ၃၄, ၄ ၈၁) ၾကား ရွိခဲ့သည္။
Smart # 1 သည် Smart အမှတ်တံဆိပ် ၏လျှပ်စစ် အသွင်ပြောင်း ပြီးနောက် ပထမဆုံး ထုတ်လုပ် မှုပုံစံ ဖြစ်သည်။ ဤ ပူးပေါင်း မှု ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အနေဖြင့် Mercedes-Benz သည် ဒီဇိုင်း အတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ Smart ၏ ကိုယ်ပိုင် အဖွဲ့သည် Geely SEA စင်ကြယ်သော လျှပ်စစ် ပလက် ဖော င်း၏ ဗိသုကာ အပေါ် အခြေခံ၍ အင်ဂျင်နီယာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဦး ဆောင်သည်။ ၎င်း ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် အရ စမတ် ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Mercedes-Benz နှင့် Geely တို့က ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ကား သစ္ မွာ ဘက္ထရီ အပူခ်ိန္ ထိန္း စနစ္ တပ္ဆင္ ထားၿပီး Smart ထုတ္ကုန္ လိုင္း မွာ အႀကီးဆံုး ေမာ္ဒယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎င်း ၏အရှည် ၊ အကျယ် နှင့်အမြင့် မှာ ၄၂ ၇၀ * ၁၈ ၂၂ * ၁၆ ၃၆ မီလီမီတာ ဖြစ်ပြီး ဘီး သည် ၂၇ ၅၀ မီလီမီတာ ဖြစ်သည်။ ဒီကား ရဲ့ ဆွဲ ကိန်း က ၀. ၂၉ ပဲ။
Smart # 1 မွာ အေနာက္ ေမာ္ တာကို အျမင့္ဆံုး 200kW နဲ႔ အျမင့္ဆံုး torque 343 Nm တပ္ဆင္ ထားပါတယ္။ 66kWh Ternary Lithium Battery ပါ ရှိပြီး အမြင့်ဆုံး CLTC မိုင် ၅ ၆၀ ကီလိုမီတာ နှင့် ၆. ၇ စက္ကန့် အထိ သုည မှ ၁၀၀ အထိ အရှိန်မြှင့် နိုင်သည်။ ကား တွင် ADAS အသိဉာဏ်ရှိသော မောင်းနှင် မှုစနစ် တပ်ဆင် ထားပြီး လိုက်လျောညီထွေ ရှိသည့် ခရု ဇ် ထိန်းချုပ်မှု၊ လမ်းသွား ထိန်းသိမ်း ခြင်း အထောက်အ ပံ ့၊ မျက်စိကန်း သော အစက်အပြောက် ရှာဖွေ ခြင်း၊ ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှု လက်ထောက် နှင့် OTA အဆင့်မြှင့်တင် မှုတို့ကို ထောက်ပံ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Geely Automobile Renault Korea Motors တွင် အစုရှယ်ယာ များ ဝယ်ယူ မည်
AC အ နှေး အားသွင်း mode မှာ 80% မှ အားသွင်း ဖို့ 7.5 နာရီ ကြာ နှင့် DC က အစာရှောင်ခြင်း အားသွင်း mode မှာ 150kW အားသွင်း ပုံ နှင့်အတူ, ပုံမှန် အစာရှောင်ခြင်း အားသွင်း ပုံ နှင့်အတူ မိနစ် 30 အတွင်း 80% မှ အားသွင်း နိုင်ပါတယ် နေစဉ် 80% မှ အားသွင်း ဖို့ 7.5 နာရီ ကြာသည်။ အချိန် 40 မိနစ် အတွင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီဇိုင်း ပိုင်း အရ Smart # 1 သည် frameless တံခါး များ၊ လျှို့ဝှက် တံခါး လက်ကိုင် များ၊ လေ ခွင်း ကိရိယာ များနှင့် သုံး ပြော သော စတီယာ ရင် ကိုအသုံးပြုသည်။ ရှေ့ အပို အခန်း ၏ volume သည် 15L ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် အခြေအနေတွင် နောက် ခန်း ၏ volume သည် 323L ဖြစ်သည်။ နောက် ထိုင်ခုံ များသည် ၁၃ စင်တီမီတာ ရှေ့ နှင့်နောက် လျှော ကို ထောက်ပံ့သည်။ ၄/၆ အချိုးအစား ဖြင့် လျှော့ချ ပြီးနောက် ပင်စည် ၏ပမာဏ ကို 986L သို့တိုးမြှင့် နိုင်သည်။
Geely စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီ Meizu ကိုဝယ်ယူ မည်
Geely Group ရဲ႕ စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီဟာ တ႐ုတ္ စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္ သူ Meizu ကို ဝယ္ယူ ဖို႔ ခ်ဥ္းကပ္ ေနပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ မၿပီး ျပတ္ ေသးတဲ့အတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းႏႈန္း ကိုေတာ့ မသ တ္